नेपाल आउन थाल्यो कोरोनाभाइरसबाट बचाउने औषधि ‘रेम्डेसिभिर’, नेपाली मूल्य कति ? – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/नेपाल आउन थाल्यो कोरोनाभाइरसबाट बचाउने औषधि ‘रेम्डेसिभिर’, नेपाली मूल्य कति ?
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसबाट जीवन बचाउने औषधि रेम्डेसिभिर नेपाल आउन थालेको छ । ३ भारतीय कम्पनीले यो औषधि नेपाल आपूर्ति गर्न सुरु गरेका हुन् । रेम्डेसिभिर एक प्रकारको एन्टिभाइरस औषधि हो जसलाई कोरोनाभाइरस संक्रमितहरुको हकमा जीवनरक्षक मानिएको छ । औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले समाचार एजेन्सी एसिया न्यूज इन्टरनेशनलसँग कुरा गर्दै भारतीय कम्पनीबाट औषधि आपूर्ति सुरु भएको पुष्टि गरेका हुन् ।
ढकालका अनुसार माइलेन, सिप्ला र हेटेरो ड्रग्स गरी तीन कम्पनहिरुले रेम्डेसिभिर औषधि आपूर्ति सुरु गरेका हुन् । ढकालका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले पनि नेपालमा यी तीन कम्पनीको एन्टिभाइरल औषधिको मात्रै प्रयोगको अनुमति दिनेछ । मागअनुसार माइलेनले ५७० सीसी औषधी आपूर्ति गरेको ढकालले बताए । भारतीय कम्पनीसँग सम्पर्क गर्न सजिलो भएको र उनीहरुको औषधि पनि सस्तो भएकोले ती कम्पनीको औषधि प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको ढकालले बताए ।
नेपालमा रेम्डेसिभिरको एक सीसीको मूल्य ७ हजार ८ सय रुपैयाँ पर्छ । कोरोनाभाइरसको उपचारमा रेम्डेसिभिर निकै उपयोगी देखिएको छ । आइसीयूमा रहेका बिरामीहरुका लागि पनि यो औषधि प्रभावकारी देखिएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा यो औषधि नेपालमा उपलब्ध थिएन । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि रेम्डेसिभिरलाई कोरोनाभाइरसको उपचारको लागि प्राथमिक औषधिको रुपमा सूतिकृत गरेको छ ।
Beraking news.. फेरि लकडाउन गर्ने निर्णय:बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका यी क्षेत्र बन्द हुने!
यी हुन न’रपि’चास जस्ले युवतीको वसमै सामूहिक ज’बर्ज’स्ति क’र’णी १६ वर्षीया कि,शोरीलाई गरे
BREAKING NEWS::अन्ततः माघ ५ गतेबाट अनिश्चितकालिन हड्ताल र बन्द गर्ने निर्णय !